एक वर्षमा २२ जना पुरुषले जन्माए बच्चा : कसरी भयो यस्तो सम्भव ? – Khabaarpati
एक वर्षमा २२ जना पुरुषले जन्माए बच्चा : कसरी भयो यस्तो सम्भव ?
October 15, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on एक वर्षमा २२ जना पुरुषले जन्माए बच्चा : कसरी भयो यस्तो सम्भव ?
काठमाडौं । महिला गर्भवती हुनु र बच्चा जन्माउनु कुनै नयाँ कुरा होइन । तर, अष्ट्रेलियामा भने एक वर्षमा २२ जना पुरुष सुत्केरी भएका छन् । अष्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्ट अफ ह्युमन सर्भिसले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष २२ जना पुरुष गर्भवती बने र बच्चासमेत जन्माए ।
अष्ट्रेलियामा त्यसरी बच्चा जन्माउने पुरुषहरु समलिंगी पुरुष रहेको पनि बताइएको छ । तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा यसरी बच्चा जन्माउने ट्रान्सजेन्डर अष्ट्रेलियाली पुरुषको संख्या २ सय २८ रहेको छ । अष्ट्रेलियामा पहिलोपटक सन् २००९ मा पुरुषले बच्चाको जन्म दिएको घटना सार्वज्निक भएको थियो ।
त्यस समय पुरुषले बच्चा जन्माउने विषयलाई लिएर कतिपय मानिसहरु अष्ट्रेलियामा विरोधमा समेत उत्रिएका थिए । जसका कारण बच्चा जन्माउने पुरुषको नाम गोप्य राखिएको थियो । तर अहिले समय बदलिएको छ । मेलबर्न विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक समलिंगी पुरुषको बच्चा जन्माउने हकको पैरवी गर्दै आएका छन् ।
उनका अनुसार अब लैंगिकताको विषयमा समाजले आफ्नो सोच बदल्ने बेला आएको छ । उनी भन्छन्, जो पुरुष आफ्नो जीवनमा यस्तो फैसला लिन्छन् उनीहलाई बच्चा जन्माउनमा कुनै समस्या छैन ।
नायक पल शाहले सुटुक्क रियासा दाहाल संग बिहे गरे,मिडियाको अगाडी बेहुला बेहुली मज्जाले नाचे(हेर्नुहोस भिडियोनै)
अमेरिकामा सवारी दुर्घटनामा परि नेपाली चेली पारुको नि धन
October 15, 2020 Khabar Pati
झुक्किएर पनि नखानुहोस् यस्ता खालका आलु
जब आफ्नो प्रेमीले अर्कैसंग विवाह गर्ने थाहा पाएपछी प्रेमिका पुगिन् बेहुली बनेर मण्डपमै, त्यसपछि जे भयो …
October 22, 2020 October 22, 2020 goodmam